Dhirta xayawaanka ah | February 2020
Arukus waxaa caan loo yaqaan Volzhanka, waa warshad beerta oo aad u badan oo qurxiyo qurux badan oo qurxin doona xagaaga xagaaga. Faa'iidada ugu weyn ee warshadu waa in Volzhanka uusan u baahnayn daryeel, wuxuu horumarin karaa wakhti dheer oo aan kormeerayn, wuxuu leeyahay noocyo iyo noocyo badan.
Sifooyinka beeraha ee karantiilka ee bannaanka u furan
Qaranthus waa duufaan joogto ah. Dhererka dhirku wuxuu ku kala duwan yahay 30 illaa 60 sentimitir, afkoda ayaa la jarjaray, qumman. Caleemaha waa cagaar madow, saafi ah, dhalaalaya, oo leh xididado kala duwan. Ubaxyada karantiilka waa hal, ballaaran, midab, caddaan ama casaan midab leh, oo aan lahayn ur.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Dhirta xayawaanka ah 2020